Daldaltootni safartuuwwan jallisuun hanna raawwatan akkamiin ibsamu?
Daldaltootni safartuuwwan jallisuun hanna raawwatan akkamiin ibsamu? Featured
Madaallii ykn safartuu hatuun gocha balaaleffatamuudha
Finfinnee: Qorannoon Abbaa Taayitaa Dorgommii Daldalaafi Eegumsa Bitattootaa RFDIn tibbana gaggeeffame tokko akka argisiisutti, magaalaa Finfinnee keessatti manneen fooniifi daldaltootni shaqaxoota addaddaa gurguran meeshaalee safartuuwwanii ykn madaallii hangaa jallisuun hawaasa saamaa jiran haalaan baay’achaa jiru. Kunis, manneen foonii magaalittii keessa jiran kuma shan keessaa manneen daldala foonii 33fi suuqota 77 irratti eeruu hawaasaarraa dhiyaateen qorannoon kan adeemsifame ta’uusaa ibseera.
Kanneen keessaa meeshaaleen safartuu hangaa itti fayyadamuun sirna gurgurtaa fooniifi shaqaxootaa raawwatan %64 ta’an dogoggoraan madaallii hangaa kan jallisan yoo ta’u, %36 ammoo qixuma sirriin maamiltootasaanii keessummeessaa jiraachuusaanii argannoon qorannichaa mul’iseera.
Obbo Mangistuu Mollaa Daariktera Qo’annoofi Qorannoo abbaa taayitichaati. Akka isaan ibsanitti, xiyyeeffannoon qorannichaa inni guddaan, daldaltootni magaalaa Finfinnee dameewwan addaddaarratti bobba’uun hawaasa tajaajilaa jiran meeshaalee safartuuwwanii sirrii hintaane fayyadamuun qabeenya lammiilee karaa dogoggoraan saamuurratti argaman baay’achaa waan jiraniif, maqsuuf kan akeekameedha. Bu’aan qorannichaas irra caalaatti fayyadamtoota ykn bitattoota kan fayyadu ta’ullee qaamoleen dhimmisaa isaan ilaallatu hordoffiifi to’annoo walirraa hincitne akka taasisaniif kan gargaaruudhaa, jedhu.
Akka argannoo qorannichaattis, manneen lukaandaa dhuunfaafi waldaalee hojii gamtaa, akkasumas suuqota shaqaxoota gurguraa jiranirratti dogoggorootni hedduun kan mul’atan yoo ta’u, meeshaaleen safartuuwaanii ykn madaallii hangaa qaamnisaa guutuu hintaanetti safaruun gurguruu, meeshaalee kanneen jallisuun kaa’uu, argisiistuun(xiyyootni) meeshaalee hangaa zeeroorraa akkawaan kaayameetti fakkeessuun gowwomsuufi keessoo meeshaalee hangaa hidhuun bal’inaan kan mul’achaa jiru ta’uusaa ibsaniiru. Kunimmoo daldaltootni omisha fooniifi shaqaxoota garagaraa maamiltoota isaaniitti gurguratan madaallii hangaa sirrii hintaaneen fayyadamaa waan jiraniif, hawaasa gowwomsuun hanna raawwachaa jiraachuusaanii kan eeruudha jedhaniiru.
Kanaaf, kutaaleen hawaasaa kamuu si’a omishaalee fooniifi shaqaxoota bitatanitti meeshaaleen safartuuwwanii ykn madaalliin hangaa daldaltootni itti fayyadamaa jiran sirrii ta’uusaaniifi dhabuusaanii battalumatti ilaaluun mirkaneessuu akka qaban yaadachiisaniiru. Keessumaa ammoo argisiistotni ykn xiyyootni meeshaalee madaallii hangaa zeeroorraa ka’uusaanii ilaalanii akka sirratu gochuun barbaachisaa ta’uusaas gorsanii, daldaltootni gocha akkasiirratti bobba’uun lammiilee biyyattii miidhaa jiran of qusachuu akka qaban hubachiisaniiru. Ragaan daldaltoota badii hanna raawwataniirratti argamannaan hanga hidhaa waggaa 7 ni adabsiisas jedhaniiru.
Obbo Ayyalaa Saayilee ammoo Pirezidaantii Waldaa Daldaltoota Manneen Foonii Magaalaa Finfinnee yoo ta’an, gowwoomsaafi hanni meeshaalee safartuutiin bitattoorra gahaa jiru akkuma biyyaattuu ulfaataa ta’uusaa dubbatu. Kana ammoo seeraan hordoffiifi to’annoo taasisuu qofaan ittisuun waan hindanda’amneef, hubannoo hawaasaa cimsuun murteessaadha, jedhu. Kunimmoo damee daldalaa maraa keessatti hanna raawwatamuu danda’an dura dhaabachuun akka falmatan ykn morman kan jajjabeessu waan ta’eef, mootummaan xiyyeeffannoon irratti hojjechuu akka qabu yaadachiisaniiru.
Kanaaf, fayyadamtootni kamuu meeshaalee safartuuwwaniin hanna raawwataman maqsuuf ykn ittisuuf hubannaafi beekumsasaanii gabbifachuu akka qabanis hubatameera.
Torban kana/This_Week 12405
Guyyaa mara/All_Days 1821825